झाँक्रीलाई रिहा गरः नेकपा प्रचण्ड–माधव - नेपालबहस
झाँक्रीलाई रिहा गरः नेकपा प्रचण्ड–माधव
| १४:५२:०३ मा प्रकाशित
२९ माघ, काठमाडौं । केपी ओली सरकारले नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई आज राजकाज मुद्धा लगाएर गिरफ्तार गरेपछि राजनीतिक माहोल तरंगित भएको छ । सरकारले नेतृ झाँक्रीलाई पक्रेपछि आजै यो समूहले तत्काल रिहाइको माग गरेको छ ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग राखेका हुन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खिल्ली उडाउँदै गरिएको यो गिरफ्तारीले वर्तमान सरकारको घोर अलोकतान्त्रिक निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उदांगो बनाएको छ – विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको ढाडो आदेशमा नेतृ झाँक्रीलाई प्रहरीले पक्रेको घटनालाई धेरैले गलत र अनुचित भनेकाछन् । नेकपा अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालसम्मले ओलीको निरंकुशताले हद पार गरेको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस्तै नेकपा प्रचण्ड –माधव समूहकै नेताहरु योगेश भट्टराई र विष्णु रिजालले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्काे आलोचना गरेका छन् ।
उता, नेकपाकै अर्का नेता जनार्दन शर्माले ओली सरकारले आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न झाँक्रीलाई पक्रेको बताएका छन् । सबैले विगतमा सकृय राजतन्त्रका बेलासमेत नेपाली जनताले शासकको खुलेर आलोचना गर्दा कोही पक्राउ नपरेको तर अहिलको लोकतान्त्रिक भनिएको सरकारको मति चाहिं गए गुज्रेको भन्दै चर्काे आलोचना गरेका छन् ।
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले समेत झाँक्रीको गिरफ्तारी सर्वसत्तावादको उत्कर्ष भन्ने चित्रण गरेका छन् । थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेता थापा भन्छन्–कर्तव्य निर्वाह गर्न छाडेर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक गर्ने अनि त्यसमा प्रश्न गर्नेलाई झ्यालखानामा राखेर तर्साउन खोज्ने ? उहिले महाराजा अहिले राष्ट्रपति । सरकार झ्यालखानाको संख्या थप, किनकी सत्यको पक्षमा बोल्ने मुख तिमीले देखाएको त्राशले बन्द हुँदैन ।
नेपाली राष्ट्रबादको पक्षमा उभियो परिवार दल १८ घण्टा पहिले
पर्यटकीय सम्भावनाको पुञ्ज, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज ६ दिन पहिले
गृहले गर्‍यो ५२ जना सीडीओहरुको सरुवा, काे-कहाँ ? १ दिन पहिले
प्रहरीको फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान २ दिन पहिले
चार दिनदेखि बेपत्ता वृद्ध दम्पती अझै फेला परेनन् १ दिन पहिले
देउवा तानातानमा, प्रधानमन्त्री बन्न भने नैतिक संकट ! २ दिन पहिले
ग्रीसमा फेरी लकडाउन, विद्यालयहरू बन्द ! २ हप्ता पहिले
प्रजातन्त्र प्राप्तिको ७१ औं वर्षपछि कठिन र जटिल मोडमा हामी छाैं : डा. कोइराला १ हप्ता पहिले
बंगलादेशबाट खरिद गरेको युरिया मल यसै साता आउने ३ हप्ता पहिले
ड्युटीकै क्रममा अचानक लडेका सशस्त्रका इन्सपेक्टरको मृत्यु ३ हप्ता पहिले
बागलुङ बाढी–पहिरो : दुई महिना बित्यो, बेपत्ता १५ भेटिएनन् ४ महिना पहिले
एक हजार दुई सय १६ थान नक्कली नोटसहित दुई जना पक्राउ ५ महिना पहिले
के तपाई ट्राफिक लाइटलाई बेवास्ता गरि सवारी साधन चलाउनु हुन्छ ? ३ महिना पहिले
काठमाडौंका स्थानीय तह तीन हप्ता बन्द ७ महिना पहिले